Vaovao - paompy misy kofehy HSS matihanina
Paompy kofehy HSS matihanina
Nandritra ny taona maro, dia nampiasa sy / na nanandrana bitsika fandavahana am-polony maro ho an'ny fampiharana rehetra izahay. Amin'ity famerenana ity dia tianay ny mamaritra ny fandavahana mety indrindra amin'ny fampiharana vy. Tafiditra ao anatin'izany ny vy mihamafy, vy tsy misy fangarony, aliminioma sns. Izahay dia maniry mihitsy aza ny hahita ny karazana fantsom-pandavahana afaka mitroka ireo bolts mihamafy izay mety ho hita ao amin'ny bolan'ny motera. Nanontany anay ihany koa ny olona momba ny bitsika fandavahana amin'ny fandavahana amin'ny vy vy. Ireo no faritra itodihantsika ary tokony hitarika anao amin'ny làlana tsara.
Mazava ho azy fa ny kely indrindra amin'ny vy na vy dia manamafy dia mifangaro kobalta. Ireo bitika kobalt ireo dia mampiasa alloys misy kobalta 5% -8%. Ity kobalta ity dia mamorona ampahany amin'ny fifangaroana vy, ka ny hamafin'ny fitrandrahana dia tsy hataon'ny firakotra (toy ny titran'ny boroka titanium). Mamakivaky ilay izy manontolo.
Azonao atao koa ny manasa ireo bits ireo-tombony lehibe hafa. Raha vantany vao tsapanao fa ny vidin'ny kobalt drill bitika dia ambony lavitra noho ny karazana bitika fandavahana fihodinana dia zava-dehibe izany. Tsy toy ny oksidana mainty na tongo fandavahana titane, te hitahiry ireo sombin-javatra ireo ianao rehefa tena ilainao izany.
Rehefa atsofohy amin'ny kobalta kely dia alatsaho menaka mitete ny vy mba hitazomana ny sisin'ny fanapahana rehefa manapaka. Raha azo atao dia mila mieritreritra mametraka hazo vitsivitsy eo ambanin'ny firafitry ny vy koa ianao. Io dia ahafahanao manapaka fitaovana madio nefa tsy mikapoka ny velarana mety hanadonto ny sisin'ny fanapahana.
Rehefa miresaka momba ny lavaka fandavahana amin'ny vy mafy isika, dia miresaka momba ny vy misy entona na avo lenta izay matetika no ampiasaina amin'ny alàlan'ny fitsaboana hafanana sy ny fizotrany. Ny vy mihamafy dia mateza, mahazaka akanjo, harafesina ary mitafy. Ny ankamaroan'ny vy hitantsika amin'ny teknikan'ny mekanika, ny famokarana angovo ary ny fitaterana dia vy mafy. Ny potika fandavahana vy tsara indrindra dia azo natao ho an'ireo fampiharana vy mafy ireo, na azo hamarinina amin'ny hafainganam-pandehan'ny vy vy malefaka kokoa.
Ny vy tsy misy fangarony dia firaka vy misy farafaharatsiny 10.5% chromium, ary misy isa samihafa. Noho ny fanoherana ny harafesina sy ny tasy, ny famirapiratany tsara ary ny vidin'ny fikojakojana ambany dia manana fampiasana ara-barotra maro izy io, ao anatin'izany ny kojakoja fandrahoan-tsakafo, kojakojam-panaka, kojakojan-tokantrano, fatana fanorenana ary fitaovana fandidiana.
Na izany aza, na inona na inona fahasamihafana eo amin'ny bika na ny firafitry ny simika, ny vy mafy sy vy tsy dia matevina dia sarotra apetraka. Ny fampiasana milina fandavahana matetika no fomba tsara indrindra hahazoana vokatra avo lenta.
Ny fitrandrahana kobalt M42 nataon'i Drill America dia mahay indrindra amin'ny fandavahana izay zavatra atsipintsika azy ireo. Rehefa avy nizaha fitaovana isan-karazany izahay dia nifidy ny fitrandrahana jobber ho fantsom-borosy vy mafy indrindra.
Ny bitika fandavahana dia manana teboka 135 ° hisarahana, izay afaka manome anao hafainganam-pandeha mahomby sy maharitra ary mahomby. Ny fantsom-pandavahana lava momba ny halavan'ny asa dia tena mandaitra amin'ny fandavahana herinaratra tsy misy tariby ampiasaina amin'ny fandavahana eny an-toerana. Izy ireo dia novokarina mifanaraka amin'ny National Aerospace Standard 907. Noho ny hamafin'izy ireo, ny hafainganam-pandehanao dia 30% haingana kokoa noho ny fampiasana fitrandrahana vy vita amin'ny vy haingam-pandeha M2. Ny Drill America koa dia tsy mikorisa shaft amin'ny boribory boribory lehibe kokoa-mba hahafahanao mahazo henjana kokoa, saingy mila chuck 1/2 santimetatra koa ianao hitondrana azy ireo.
Ampiasao ireo sombin-javatra ireo rehefa mandavaka fitaovana matanjaka sy matanjaka be, toy ny vy vy na titanium mihitsy aza. Nisafidy ny kitapo D / A29J-CO-PC izahay. Ahitana sombin-javatra 29 ao anaty boaty vaky. Ny trano boribory dia mamela anao hanala mora foana ilay bitika fandavahana tena ilainao.
Manana fampahalalana bebe kokoa momba ireo sombintsombiny etsy ambany ireo izahay, saingy tianay ny endriny matevina sy ny trano mety. Nahavita asa tsara tamin'ny vy izy ireo ary nitazona sisiny maranitra na dia nandavaka lavaka be aza.
Raha mikasa ny handavaka vy na vy nohamafisina ianao dia tianay ny setran'ny boribory M-42 kobalt Irwin miisa 29 napetraka ho toy ny napetaka fandavahana vy tsara indrindra ho anay. Raha ny marina dia tsy ilay fandavahana haingana indrindra no nahamaika anay. Izany dia mifandraika amin'ny fampiasana vy M42 haingam-pandeha sy ny akorany tena tsara.
Betsaka ny barika fandavahana kobalt mora vidy no mampiasa vy M35 misy fangaro kobalta 5%. M42 vy dia mampiasa fangaro kobalta 8%. Izany dia manome hamafisana kokoa azy. Izy io koa dia ahafahanao mandady amin'ny hafainganam-pandeha avo kokoa noho ny M35. Raha tsy hitrandraka vy mafy ianao dia hivarotra kitapo kobalt M35 i Irving.
Izany dia mitondra antsika amin'ity raharaha ity. Raha mandavaka be dia be ianao dia zava-dehibe ny toetoetran'ny fantsonao. Ny fitsidihana kely dia mety hahasosotra (miresaka aminao izahay ao Milwaukee!) Na tena fahombiazana toa ity raharaha savily telo sosona Irwin ity. Tianay ny fanazaran-tena izay mora idirana, azonao atao ny milaza ny habeny avy eo alohan'ireo fandavahana tsirairay. Amin'ny ankapobeny, ity kit ity dia manome anao bits tsara indrindra ho an'ny fampiharana vy isan-karazany.
Drill America D / A29J-CO-PC dia misy fantsom-borosy 29 ao amin'ny trano boribory mahatohitra. Mampiasa vy vy kobalt M42 izy ireo hanamboarany ireo bitsika ireo, ka mitrandraka tsara ary tsy mafana be haingana. Na dia efa nandavaka lavaka am-polony aza izy ireo dia toa nijanona maranitra sy maranitra hatrany. Ny trano boribory dia mamela anao hanala mora foana ilay bitika fandavahana tena ilainao. Vidio ny vidiny $ 106.
Ny fahombiazan'ny kitapo metaly Irwin 29-cobalt M-42 metaly fandoro metaly dia mitovy amin'ny kit M42. Ny votoatin'ny kobalta ao anaty fangaro vy dia somary latsaka kely fotsiny, fafana vetivety fotsiny. Hahazo izany tranga tsara izany ianao. Ny fifanakalozana dia vidiny. Ianao dia afaka mahazo ity fonosana ity amin'ny $ 111 ihany.
Ho an'izay mitady ny fitrandrahana vy tsara indrindra dia manana vaovao tsara izahay. Ny bitsika fandavahana mitovy amin'ny ampiasanao amin'ny vy mafy dia azo ampiasaina amin'ny vy tsy misy fangarony. Ny vy novonoina dia medium vy misy karbaona avo izay notsaboina, novonoina ary nalona tamin'ny farany. Ny firaka vy tsy misy fangarony dia misy chromium (10% farafaharatsiny) sy nikela, mahatonga azy ireo tsy mahazaka harafesina. Amin'ny maha vy vy ambany karbaona azy dia manana hamafin'ny natiora ny vy tsy misy fangarony ary tsy mila fitsaboana manamafy nentim-paharazana.
Ny fandavahana vy tsy misy fangarony dia mitaky bitika bitika kely, ilay bitika kobalt izay atolotray etsy ambony. Raha ny voalaza, ny vy tsy misy fangarony dia mihamafy rehefa mihombo ny fandavahana ka miadana matetika dia afaka manampy anao hiditra amin'ny fitaovana mahomby kokoa. Mampiasà menaka fanapahana na menaka manitra mitovy amin'izany rehefa mandravaka lavaka amin'ny vy tsy misy fangarony, ary asio tsindry ampy hijerena ny fanesorana azo antoka ny fitaovana. Na ny bitsika fandavahana vy tsy misy fangarony aza dia hafana rehefa mandeha ny fotoana, koa miomàna hanaraha-maso ny fanangonana hafanana.
Ny bitika borosy Milwaukee Red Helix cobalt dia voatanisa ao amin'ny lahatsoratray fandavahana tsara indrindra, miaraka amina endrika amam-bika azo ahodina ho fanesorana ireo puce haingana. haingana loatra? Sahabo ho 30% eo ho eo noho ny ankamaroan'ny fandrefesana bifurcated 135 ° hafa izay notsapainay. Ny endrik'izy ireo tsy manam-paharoa dia tsy vitan'ny hoe manampy azy ireo handavaka lavaka mahomby fotsiny izy ireo, fa manampy amin'ny fampangatsiahana ihany koa. Ny varotra varotra dia ireo bitika ireo izay manakaiky ny tendrony. Milwaukee dia mandà izany amin'ny fanaovana azy ireo ho fohy kokoa noho ny sasany amin'ireo olona hitantsika. Na izany aza, nitarin'izy ireo ihany koa ilay sodina nankany amin'ilay hazo. Ny valiny dia bitika kely fandavahana miaraka amin'ny halalin'ny fandavahana.
Ny tendron'ny fitaovana fisarahana 135 ° dia manampy amin'ny fanombohana ny lavakao, ary ny lavaka lehibe kokoa dia misy chipbreakers-groove eo afovoan'ny sisin'ny fanapahana mba hampihena bebe kokoa ny fananganana hafanana. Tianay ny hafainganam-pandehan'ireny drills ireny sy ny fahafahan'izy ireo manala vy amin'ny tadiny mafy sy mahomby. Ny fitambaran'ny lohan'ny fanapahana tsy manam-paharoa sy ny famolavolana sodina dia mahatonga ireo koba vy tsara indrindra ho antsika, indrindra ny vy karbaona.
Ny 1/4 ″ hex dia tsy hita. Rehefa mila azy ireo milina metaly matevina sy mafy kokoa izy ireo dia ampiasao ao anaty milina fandrehitra na fandavahana anao.
Misaotra ny fifangaroan'ny vy-kobaltaly, rehefa manjary tsy manjavona intsony ny toro-hevitra, mikasa ny hanenjana azy ireo. Ny sandan'ny kitapo dia mahatonga ireo bitsika fandavahana tsara indrindra ho an'ny vy.
Tianay ny kalitaon'ny famokarana setran'ny mpanamory fiaramanidina DeWalt. Izy io dia manana ivon-tsarimihetsika, izay mampitombo tsikelikely ny hamafin'ny fantsona rehefa manakaiky ny fotony. Raha mikasa ny manapaka vy tsy misy fangarony ianao dia andramo ireto bitika ireto, fa tsy handiso fanantenana azy ireo ary tsy hanao lavaka madio amin'ny vy mafy.
Indraindray mila mandavaka vy ianao… fa ny vy kosa milevina amin'ny beton. Ho an'ireo rindranasa ireo dia mila bika fandavahana toa Diablo Rebar Demon SDS-Max sy SDS-Plus ianao. Tianay kokoa io famolavolana io mihoatra ny an'ny cutter Bosch rebar satria ianao mampiasa ilay faritra fandavahana mitovy amin'ny fandavahana sy hidirana amin'ny rebar. Miaraka amin'ny Bosch, azonao atao ny mihodina amin'ny alàlan'ny maody fametahana herinaratra, mifamadiha amin'ny mpikapa rebar amin'ny maody fihodinana fotsiny, ary avy eo miverina any amin'ny faritra fandavahana tany am-boalohany mba hamenoana ny lavaka.
Ireo bitika fandavahana ireo dia manafoaka haingana amin'ny beton ary avy eo manohy amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny vy. Amin'izao fotoana izao dia tena tsy mahita vokatra mifaninana hafa eny an-tsena ianao, noho izany sosokevitra tsotra momba ny famokarana. Mino izahay ny famerenana ny asanao-ka raha misy kely afaka mamonjy fotoana sy vola aminao dia fandresena lehibe ao amin'ny bokinay izany.
Araka ny efa nolazainay tetsy ambony, ny bitsika mpitrandraka bosch rebar dia manome safidy mety, saingy hampiadana anao izy ireo rehefa miasa. Ireo bitsika fandavahana ireo dia tokony ho azo ampiasaina mandritra ny fotoana fohy, satria izy ireo ihany no nanapaka ny vy tamin'ny vava, fa aleonay ny vahaolana fanapahana ankapobeny. Vidio ny milina fanapahana Bosch rebar eto.
Milwaukee Hole Dozer misy nify karbida dia mandresy amin'ny fandavahana vy. Izy io dia mahazaka vy tsy misy fangarony, nefa afaka mandray zavatra malefaka kokoa noho izy ihany koa. Ireo no tsofa fandavahana vy tsara indrindra azon'ny elektrisianina, HVAC ary / na MRO matihanina ampiasaina.
Satria miasa tsara amin'ny metaly sy hazo izy ireo, izay matihanina mitady fantsom-baravarana ankapobeny dia tokony ho raiki-pitia amin'ny famokarany. Ny zava-bitany dia ambony lavitra noho ny bimetal blades, ary afaka mitantana fitaovana tsy azo kitihina (na tsy tokony) hikarohana ny tsiranoka karbida vita amin'ny simenitra.
Ny ekipanay dia mampiasa Irwin Unibit Cobalt Step Bits ho an'ny fampiharana fandavahana vy manify haingana. Ny fangaro kobalta dia manome ain'asa serivisy lava kokoa ho an'ireo. Koa satria lafo sy sarotra tohina ny fanazaran-tena, dia tianay izy ireo haharitra araka izay azo atao.
Irwin dia manome fambara Speedpoint ho an'ireo bitika ireo. Manampy amin'ny fanombohana haingana ny fandavahana ary mampihena ny fihoaram-pefy. Tokony hiaiky ihany koa isika fa ireo no lasa fantsom-by faran'izay metaly tsara indrindra, ampahany satria ny laser Irwin dia nametaka ny fandrefesana tao anaty sodina. Tsy reraka haingana toy ny sombin-tsarimihetsika hafa nampiasainay izy ireo.
Ny bitsika fandavahana dingana maromaro dia manome vahaolana mety ho an'ny elektrisianina sy ny hafa izay maniry handavaka amin'ny alàlan'ny vy sy fitaovana matevina. Na dia tianay aza ny maodely Irwin Cobalt etsy ambony, ny fikirakirana ny dingana roa fihodinana milwaukee dia mety tsara ary afaka mifanaraka amin'ny takian'ny tranokala iraisana. Azonao atao ny mividy ireto borosy borosy vita amin'ny alim-bolan'ny aluminium nitride ireto avy amin'ny kitapo isan-karazany manomboka amin'ny US $ 90 ka hatramin'ny US $ 182.
Diablo dingana drills dia mampanantena fa hampitombo avo roa heny ny hafainganan'ny fanapahana ary hanitatra in-6 ny fiainam-panompoana. Izy ireo dia manome an'io ampahany io amin'ny fizotran'ny fikolokoloana CNC. Tianay ny tendron'ny fisarahana 132 °, izay saika manala ny filana mialoha ny fandavahana. Afaka mahazo habe ianao manomboka amin'ny 1/2 ka hatramin'ny 1-3 / 8 santimetatra. Ny vidiny isaky ny kely dia eo anelanelan'ny US $ 23,99 sy US $ 50,99.
Ny vovo-drill vita amin'ny fonosana nitrika titanium dia manohitra ny harafesina sy ny fifandirana. Mikapoka oksida mainty izy satria mampitombo ny hamafin'ny atiny ary mampihena tsara kokoa ny hafanana rehefa atsofoka amin'ny alàlan'ny vy. Ho an'ny fandavahana vy, dia raisinay ho takiana farafahakeliny izany.
Miaraka amin'ny titanium nitride dia tsy maintsy tadidinao fa manarona ilay kely fotsiny ilay izy. Rehefa manaisotra ny sisiny ny pataloha dia saika tsy maintsy soloinao izy ireo. Aza mampiasa an'ireto sombin-javatra ireto amin'ny fandavahana vy mafy na vy vy-raha tianao haharitra izy ireo.
Ny kobam-baravarankely koba tsara indrindra ho an'ny fandavahana vy dia vita amin'ny alika kobalt 8% (M42). Azonao atao ihany koa ny mahita ireto boribory ireto miaraka amina fangaro kobalta 5% (M35). Koa satria ny koba dia afangaro amin'ny vy, dia tsy ho tonta toy ny firakotra titanium na oksida mainty. Midika koa izany fa azonao atao ny manasa azy ireo alohan'ny hisolo azy ireo. Manampy amin'ny fitsitsiana vola izany rehefa mividy ireto andiana kely lafo vidy ireto.
Ny koban'ny fandavahana kobaltara no safidinay voalohany amin'ny fandavahana amin'ny metaly (indrindra ny vy mafy sy vy tsy misy fangarony).
Mety nisy zavatra tsy azontsika teny an-dàlana-azontsika izany. Amin'ny fotoana iray dia tsy maintsy manoritra tsipika isika ary mamita ilay lahatsoratra. Izany no voalaza-ampahafantaro anay anay izay heverinao fa ny fandidiana vy tsara indrindra. Mametraha hevitra etsy ambany-indrindra raha manana tantara "mahery fo" ianao momba ny fomba ahafahan'ny teboka iray manokana mamoaka anao amin'ny olana.
Tsy maninona! Fantatsika fa ny safidin'ny tena manokana no mitarika amin'ny famaritana ny kely indrindra fandavahana ary samy hafa ny Pro tsirairay. Manomeza tombontsoa ho an'ny Pro Tool Nation ary lazao aminay ny safidinao voalohany sy ny antony itiavanao azy. Aza misalasala mametraka azy amin'ny hevitra etsy ambany na amin'ny Facebook, Instagram ary Twitter!
Efa nijerijery tranokala "famerenana" ve ianao, saingy tsy fantatrao raha tena nanandrana an'ireto fitaovana ireto izy ireo na "nanoro hevitra" ireo mpivarotra tsara indrindra an'i Amazon fotsiny? Tsy antsika izany. Tsy mamporisika na inona na inona izahay raha tsy hoe ny tenanay no mampiasa azy, ary tsy miraharaha izay mpivarotra lehibe indrindra izahay. Izany rehetra izany dia ny manome anao soso-kevitra mety sy ny hevitray marina amin'ny vokatra tsirairay.
Hatramin'ny taona 2008, niditra tamin'ny fitaovana, hevitra ary tatitra momba ny indostria momba ny indostrian'ny fananganana, ny fiara sy ny fiara ary ny bozaka izahay. Ireo mpandinika matihanina dia miasa amin'ny indostria mifandraika ary manana ny fahaiza-manao sy ny traikefa hahafantarana raha afaka mahomby tsara eo amin'ity sehatra ity ny fitaovana.
Isan-taona dia mampiditra sy mamerina mijery ny vokatra maherin'ny 250 izahay. Hampiasa fitaovana an-jatony maro amin'ny ekipa haino aman-jery sy seho varotra mandritra ny taona ny ekipanay.
Manontany ny mpanavao ny haitao sy ny famolavolana fitaovana izahay hahazoana fahalalana bebe kokoa momba ny sakany sy ny fomba fiasan'ireto vokatra ireto.
Miara-miasa amin'ny mpandraharaha matihanina mihoatra ny 20 izahay manerana an'i Etazonia. Manadihady ny vokatra ho anay ao amin'ny tranokalan'ny asa izy ireo ary manontany anay momba ny fomba fitsapana, sokajy ary lanjany.
Amin'ity taona ity dia hanome maherin'ny 500 ny atiny vaovao maimaimpoana ho an'ny mpamaky izahay, ao anatin'izany ny fanombanana ny fitaovana sy ny vokatra manokana.
Ny valiny farany dia fampahalalana azonao itokisana, satria isaky ny mandray sy mizaha fitaovana iray izahay dia mampiasa ny traikefa anananay amin'ny fanitsiana, siansa ary ny tontolo tena izy.
Rehefa tsy manamboatra ampahany amin'ny trano izy na milalao fitaovana elektronika farany, dia mankafy ny fiainan'ny vadiny, ny rainy ary ny mpamaky mazoto i Clint. Manana mari-pahaizana momba ny injeniera fandraketana izy ary nandray anjara tamin'ny famoahana haino aman-jery sy / na an-tserasera tamin'ny endrika iray na iray hafa tato anatin'ny 21 taona. Tamin'ny taona 2008, nanangana Pro Tool Review i Clint, narahan'ny OPE Review tamin'ny 2017, izay mifantoka amin'ny fitaovan'ny herinaratra sy ny herinaratra ivelany. Clint dia tompon'andraikitra amin'ny Pro Tool Innovation Awards ihany koa, programa fanolorana mari-pankasitrahana isan-taona natao hamantarana ireo fitaovana sy kojakoja vaovao amin'ny lafiny rehetra.
Ny milwaukee Flex Head ratchet wrench mitahiry ny tonon-taolana ary manatsara ny fidirana. Taona vitsivitsy lasa izay, napetraka eny an-tsena ny fitaovana mekanika Milwaukee, ao anatin'izany ny ratchets tsy misy tariby, valizy misy fiantraikany lehibe, fitaovana amin'ny tanana ary vahaolana amin'ny fitehirizana. Ankehitriny, Milwaukee Tool dia nametraka rafi-pitambarana ratchet lohan-doha vaovao indray. Ampiasao ny Milwaukee Flex Head Ratchet Combination Wrench, ny loha malefaka tiantsika - ary [...]
Ho an'ny fanamboarana, ny fantsom-boaloboka, ny herinaratra ary ny tompon-trano dia mety tsy misy tsofa ilaina kokoa noho ny tsofa famerenana. Sarotra ny mieritreritra ny tsy fananana tranokala fananganana. Saingy izao no zava-misy talohan'ny nampidirana an'i Milwaukee SawZall (nanjary mitovy anarana amin'ny tsofa famerenana ny anarana) tamin'ny 1951. Mety efa namaky ny lahatsoratra fahitanay mifamadika tsara indrindra ianao. Na manao ahoana ny[…]
Nandritra ny taona maro, nampiasa mpanadio tsindry be dia be izahay, ary manizingizina hatrany ny hampiasa ny Simpson, satria mahazo kalitao sy fahombiazana tsara kokoa noho ny maodely hafa amin'ny vidiny mitovy izahay. Na eo aza izany dia mbola betsaka ny mpanasa fanindriana Simpson azo isafidianana, noho izany dia nanapa-kevitra ny hanampy anao izahay hanenitra ny laharan'ny vokatra tianay. [...]
Raha mividy rojo vy Greenworks ianao dia manomboka amin'ny zoro tsara. Mamoaka tsofa rojom-by sy herinaratra mandeha amin'ny herin'ny bateria izy ireo, ao anatin'izany ny sasany amin'ireo tsofa gadra matanjaka indrindra ao amin'ny orinasa. Izy ireo koa dia manome karazana voltages azo isafidianana. Raha efa manana fitaovana Greenworks hafa ianao dia mety hifikitra amin'izany ihany [...]
Fotoana fandefasana: Jul-23-2021